Xisbiyada Mucaaridka: Wixii laga sugayey iyo waxay ku suganyihiin? Waa Kaaf iyo Kala Dheeri! | Salaan Media
Xisbiyada Mucaaridka: Wixii laga sugayey iyo waxay ku suganyihiin? Waa Kaaf iyo Kala Dheeri!
W/Q: Eng. Hussein Adan Igeh (Hussein Deyr) |UK|
Wax-qabadka baaxadda leh ee Xukuumadda M/weyne Ahmed Silaanyo wuxuu khal-khal iyo jaah-wareer siyaasadeed ku riday Xisbiyada Mucaaridka ah, kuwaasoo run ahaantii ay ka muuqato kalsooni darro iyo rajo la’aan weyni. Weli iyadoon doorasho madaxtooyo iyo mid barlemaan midnaba la gaadhin, ayaa waxaad mooddaa in xisbiyada mucaaridka ahi ay quus iyo rajo-la’aan ka joogaan inay hantaan amaba ay helaan kalsoonida aqlabiyadda shacbiga oo ay ku aaminaan talada iyo hoggaanka dalka. Codbixiyeyaashu waxay isha ku hayaan hab-dhaqanka siyaasadeed ee Xisbiyada Mucaaridka ah, waana iyaga kuwa go’aanka ugu dambeeya ka gaadhi kara cidda ay talada iyo hoggaanka dalka u igmanayaan ee ay ku aaminayaan.
Hadaf iyo himilo siyaasadeed oo ku salaysan dal iyo dad-jacayl oo mudnaanta iyo muhimadda koowaadba la siinayo danta qaranka, aragti siyaasadeed oo ku salaysan ka wada shaqaynta danta guud, wanaagga oo la isku guubaabiyo, wixii dalka iyo dadkaba u soo kordha oo lagu farxo la isuna bogaadiyo; wixii magac-xumo, sumcad-darro iyo meel ka dhac ku ah ama haybadda qaranka wax u fhimaya oo laga fogaado; quluubta iyo maskaxda bulshada oo wanaag la gashado lagana dhaadhiciyo martabaha iyo majaraha aad hayso ee aad ku soo bandhigayso inaad adigu talada dalka u dhaami lahayd kuwa hadda talada haya, …. arrimahan kor ku xusan ayaa Xisbiyada Mucaaridka ah u horseedi kara inay si dhab ah ula tar-tamaan Xisbul Xaakimka.
Mucaaridkow halkii aad horumarinta dalka idinku horseed ka noqon lahaydeen haddii aad is-hor-taagteen; markaad ka fogaateen intii aad dadka ku soo jiidan lahaydeen ee aad adeegsateen intii shacbiga idinka sii fogaynaysay, bal idinku isweydiyoo maxaa la idinka sugayaa halkeedse ku sugan tihiin?? Mucaaridkow markii aad xakamayn kari weydeen Siyaasi ku sheeg soo bur-buriyey oo dab ku shiday Xisbiyo Qaran oo hore oo aan dan ka lahayn hadaf iyo hannaan Xisbi midnaba, balse u heellan muran, aflegaado iyo isku-dirka bulshada walaalaha ah, ma wax buu idin yeelay mise waxbuu idiin soo kordhiyey? Ma taageerayaal buu kasbaday mise taageerayaal aad lahaydeen ayaad isaga daraadii ku lumiseen, kuwii idinku soo socdayna way idinka laabteen!! Ceerigaabo, Oodweyne, Awdal, Burco, Berbera iyo meelo kale oo badan ma isweydiiseen Mucaaridkow waxay durba dhabarka idiinku jeediyeen?
Mucaaridnimadu Geddaa Maaha ee dhako kale keena! Ma ogtihiin inaan hamuumta iyo quud-darraynta talada iyo hoggaanka dalka lagu hanan karin cay, aflagaado iyo mucaaridnimo ku salaysan qof ama qabiil nacayb iyo kala qaybin bulsho. Waana tubta aad haysaan haddii aad tihiin Xisbiyada Mucaaridka ah ee JSL. Sidaa aad tihiin ayaad weliba doonaysaan in Shacbigu idinku aamino talada dalka! Miyaanay ka dhignayn waraabihii, isagoo og inuu waraabe yahay, haddana yidhi AAMIN ha la ii bixiyo oo adhiga ha laygu aamino!! Shacbiga JSL iyo Xisbiyada Mucaaridka ah farqi weyn baa weli u dhexeeya. Waa Kaaf Iyo Kala Dheeri!!
RABBI naxariistii Janno ha ka waraabiyee Abwaankii Qaaliga ahaa ee Maxamed Xaashi Dhamac (Gaariye), tixdiisii Gurmad wuxuu innagu hogo-tusaaleeyey sidan soo socota:
Xilligu waa goor wax saar,
Gegaa lagu dheelayaa
Shacbigu ka gar-soore yahay.
Cidday u gartaan iyagu.
Haddaad tahay guur-u-meer
Garaabo adoon qubqubin,
Daweynaha soo gab yidhi,
Bal noo sheeg waa golee,
Waxay dadku kaa guntaan!
Nimay kala gees yihiin
Inuu libintiisa gado
Ninkii yidhi guul ka dhigo
Gub baa kaga dhacay halkaa.
Ha goyn waxa laysku yahay!
Magliga gacal loola baxay
Gondaa uma dhaadhacee,
Ha gaadhin laftoo ha jabin,
Afkaagana godob ka dhawr!
Mar baa jirta gumac la riday
Nin iinloow, daa gujada!!!
Allah ayaa Mahad iyo Mudnaanba leh,